Safidio izay tianao hampidinana rakitra Google Chrome amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Safidio izay tianao hampidinana rakitra Google Chrome amin'ny Mac
Anisan'ireo mpampiasa Mac, misy ny tsirony isan-karazany raha ny momba ny fampiasana ny browser. Ao amin'izy ireo, ny sasany tsy mampiasa afa-tsy Safari, fa ny hafa kosa tia ny mifamadika farafaharatsiny eo anelanelan'ny mahazatra, toa ny Safari, Chrome, Firefox na Opera.
Ny fampiasana izay omen'ny tsirairay amintsika dia tena miavaka. Raha mijery amin'ny alàlan'ny forum isika dia mahita hoe iza no mampiasa ny iray ho an'ny asa iray ary ny iray hafa ho an'ny fotoana fialam-boly, na iza no mampiasa ny navigateur main fa ny hafa kosa dia mitahiry fotoana fohy na famerenana horonantsary izay tsy averina navoakan'ny browser-n'izy ireo.
Noho izany, Raha mampiasa navigateur iray isika amin'ny lahasa iray ary ny iray kosa amin'ny iray hafa, dia mifanaraka hatrany fa samy hafa toerana no anaovan'ny fisintomana antsika. Noho izany, raha te hanova ny toerana misy anao Google Chrome ianao dia manazava ny fomba hanaovana izany:
Voalohany, manokatra Google Chrome izahay ary mankamin'ny safidinay. Ireo dia hita eo amin'ny biraon'ny fitaovana. Tsindrio Chrome ary ho hitantsika ny Preferensi. Ny valiny mitovy amin'izany dia azo alaina amin'ny fidirana ao amin'ny bara adiresy: Chrome: // toe-javatra /
Tsy hiseho amin'ny menio pop-up na varavarankely vaovao ny Preferences Chrome. Fa kosa, hisokatra ny takelaka vaovao antsoina hoe Settings, miaraka amin'ny fanitarana sy ny fanovana.
Mandeha any amin'ny faritra Settings izahay, eo amin'ny farany ambany, ho hitantsika ny safidy «Asehoy ny safidy mandroso»
Handeha any amin'ny faritra izahay Fampidinana. Eto isika dia afaka manao zavatra roa: Manova ny toerana anaovana fampidinana an-tsokosoko na mangataka amin'ny rafitra hanontany anay isaky ny te-hisintona izahay. Amin'ny safidy voalohany, dia tsindrio ny fanovana, ary hijerena ao amin'ny menio izay mamarana ny fanokafana ny fampirimana izay hamonjy ireo rakitra. Fa tsy izany, kitiho "Anontanio hoe aiza no hohafenana ny fisie alohan'ny hisintonana azy" Mety izany rehefa misintona rakitra marobe isika ary mametraka azy ireo mivantana ao anaty fampirimana mety indrindra ilaintsika.
Vantany vao vita dia aza mitady ny bokotra fitehirizana, satria toy ny tamin'ny serivisy rahona farany, tsy misy izany, izany hoe afaka manidy ny kiheba isika ary ho voavonjy ireo fanovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Safidio izay tianao hampidinana rakitra Google Chrome amin'ny Mac
Lalao Apple Apple 15 izay tsy tokony holavirinao
Fanambarana vaovao an'ny Apple Watch Series 2